Fiatrehana ny fifidianana: norakofan’ny TGV ny andro voalohan’ny propagandy | NewsMada
Fiatrehana ny fifidianana: norakofan’ny TGV ny andro voalohan’ny propagandy
Hatraiza hatraiza. Anisan’ny nidina an-kianja voalohany ary nameno ny lalana manerana ny tanàna, omaly teto an-dRenivohitra sy ny manodidina, ny mpanohana sy mpanara-dia ny kandidà Rajoelina. Rakotra sy nisalotra ny loko volondaoranjy avokoa izy ireo sy ny fitaovana teny aminy. Samy nahitana izany ny ankamaroan’ireo boriborintany enina. Anisan’izany ny teny amin’ny boriborintany fahatelo, niainga tetsy Ankorondrano, namakivaky an’Andravoahangy sy hatreny Besarety ny diabe narahin’ny fanentanana samihafa. Teo ireo nandeha fiara sy moto ary koa ireo nandeha an-tongotra nitety ireo tanàna sy fokontany ireo. Nandresy lahatra ireo vahoaka sy ny olona teny an-dalana koa izy ireo, amin’ny hifidianan sy hampandaniana ny kandidà laharana faha-13, mpanorina ny IEM.
Lohalarana ny mpanohana an-dRajoelina ao Toamasina…
Tsy ny TGV na ny Mapar ihany anefa fa eo koa ireo antoko politika sy fikambanana samihafa manohana ny kandidà Rajoelina. Tahaka izany avokoa ny hetsika nataon’ny mpomba ny kandidà mpanorina ny IEM, eny anivon’ny boriborintany eto Antananarivo. Tahaka izany koa ny any Toamasina. Hany nihetsika voalohany ny mpanohana ny kandidà Rajoelina. Nametaka petadrindrina sy nanao diabe namakivaky ny tanàna, notarihin’ ireo komity mitarika ny fanohanana sy fampandaniana ny mpanorina ny IEM.
Tsiahivina fa natomboka tany Antsiranana ny fampielezan-kevitry ny kandidà laharana faha-13, omaly. Nialohavan’ny fotoam-bavaka tetsy amin’ny Gara Soarano izany ny alahady teo. “Tsy maintsy hatao ao anatin’ny finoana ny fanombohana ny fampielezan-kevitra. Iza no hahatohitra antsika raha momba antsika Andriamanitra”, hoy izy tamin’ny fitsofan-drano azy tamin’izany. Nanamafy izany ny toritenin’ny mompera Serge ka nilazany fa ny fitiavana no lehibe indrindra. “Hahavita zavatra mihoatra ny tokony ho izy ny olona iray raha mitoetra marina ao aminy izany”, hoy izy.
Randria sy Sajo